Indawo Yokuphumula Enethezekile, "Itende E-Brigadoon" - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Enethezekile, "Itende E-Brigadoon"
Indlu eyindilinga ibungazwe ngu-Julie
Indawo ekahle kakhulu yokuhlola i-Puget Sound, i-Brigadoon iyindawo ye-idyllic, engathinteki isikhathi, ekude neqiniso. Indawo yokwamukela izivakashi, ubuhle nenhliziyo. Kuyinjabulo yethu ukwabelana nawe ngayo. Sithemba ukuthi uzoyithola imilingo njengathi! Zonke izivakashi eziza e-Brigadoon ziyingxenye yokwenza kube yilokho okuyikho. Lena yindawo esekela futhi igqugquzele ukucabanga nobuciko. Siyabamukela abaculi, izimbongi, abafuna, abaculi namaphupho, nabo bonke abathandi bokuphila!
I-Yurt isesiphethweni sayo sendlu enendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela nezingadi ezizinikezele. Kuwuhambo lwezinyawo olufushane oluya olwandle, uhambo olufushane lokuya edolobheni, uhambo oluhle oluya Ezintabeni Zama-Olympic kanye nohambo losuku oluya ezindaweni ezikude kakhulu ze-West Coast of America.
Njengegama layo, i-Brigadoon iyindawo ekahle kakhulu yokuphumula, ube engadini, ujabulele indawo yomlilo yangaphandle, ucabangisise, ufunde, uveze indaba, wenze izifiso, usho okuthile futhi uzinakekele thina nabathandekayo (ngokuphepha) ngalesi sikhathi esiyinselele.
4.96 · 171 okushiwo abanye
Itholakala e-Irondale, sinomlando ocebile wezinsuku ezindala zokusebenza ze-ayina, egcwele amanxiwa namakhilogremu atholakala ebhishi. Shona emanzini, kuwuhambo olumnandi nokuthula, ukushaywa wumoya okuzolile ukuya kwezinye zezindawo ezinhle kunazo zonke oke wazibona. i-hood yomakhelwane ngokwayo inezindlu ezindala kusukela ezinsukwini zomsebenzi we-ayina zakudala, kodwa futhi igcwele amaciko kanye nabacabangi besikhathi sethu!
Ngiyahamba ngezikhathi ezithile. Ungangithinta noma nini ngocingo.